Amachibi okwabelana ngezindaba
Ezweni lapho kunzima khona ukuhlukanisa phakathi kwezindaba zangempela nezingamanga, abanye abantu bazama izixazululo nika isisindokwezinye izindaba ngaphezu kwezinye, ezinjengokuthi ukuthembeka akuxhomekile emthonjeni.
Lokhu kusho ukuthi indawo yomlingisi ovela eceleni ivulekele ukunikela ngaleyo nsizakalo, futhi ube uhlobo lwesiqinisekiso se-news-sphere.
Kodwa-ke ukuze ukwazi ukuqonda izindaba, ubuchwepheshe buyadingeka, futhi isixazululo samanje asikucabangi ukuthi kulula ukuthi uchwepheshe abone amanga emkhakheni wakhe wobungcweti, kanti-ke kungenxa yomuntu ngokwazi okuvamile.
Ngakho-ke kuzoba wusizo ukudala i-interface kanye nenkundla yokuvumela ochwepheshe ukuthi bakwazi uzwakale . Ukumelana kweSybil ngendlela ye- ubuchwepheshe obuziwe izosetshenziselwa ukunciphisa ochwepheshe mbumbulu, okungabekelwa inselelo ngabanye ochwepheshe benkambu efanayo ukufakazela ukuma kwabo ukuze kugcinwe uhlelo luthembekile.
Lokhu impela kuyindlela yokugcina isango, kepha ukunciphisa umsindo nokugcwala ngokweqile, noma yiluphi uhlobo lokuhlunga lungabhekwa njengokugcinwa kwamasango.